Pakistan: Maty voatifitra tao amin’ny efitrano fitsarana ny lehilahy iray voampanga ho manevateva an’Andriamanitra. Noderaina ho maherifo ilay namono azy · Global Voices teny Malagasy
Tsy zava-baovao any Pakistan ny famonoana olona ivelam-pitsarana amin'ny fanevatevana
Voadika ny 18 Aogositra 2020 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Português, عربي, Español, Français, English
Sary avy amin'i Donald Tong/Pexels. Nampiasana Lisansa Pexels.
Lehilahy iray 57 taona no maty voatifitra tao amin'ny efitrano fitsarana Peshawar rehefa notsaraina noho ny fanevatevana ny 29 Jolay. Nosamborina avy hatrany ilay mpamono, 24 taona – tsy fantatra mazava hoe ahoana no fomba nahatafidirany tao amin'ny fitsarana niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana.
Teratany Pakistaney-Amerikana i Tahir Ahmad Naseem izay namoaka horonantsary an-tserasera milaza fa karazana mpaminany izy. Tamin'ny taona 2018, nosamborin'ny polisy tao Peshawar izy ary voampanga tamin'ny fanevatevana maro taorian'ny nametrahan'ny mpianatra madrassa fitoriana azy.
Nasehon'ny mpianatra tamin'ny manampahefana ny resaka an-tserasera miafina izay nitenenan'i Naseem fa mpaminany Islamo izy, izay manitsakitsaka ireo lalàna Pakistaney amin'ny fanevatevana.
Mino ny Miozolomana fa Mpaminany Muhammad no irak'Andriamanitra farany ary heloka amin'ny finoana ny filazana rehetra aty aoriana momba ny faminaniana.
Niatrika ny fanamelohana ho faty i Naseem tamin'ny fitsarana noho ny “fandotoana ny Anara-masin'ny Mpaminany Muhammad”.
Fotoana fohy taorian'io tranga io, namoaka ny findainy, naka sary sy lahatsarin'ilay niharam-boina ireo olona tao amin'ny efitrano fitsarana. Niely tamin'ny tambajotra sosialy Pakistaney ny lahatsary iray mampiseho ny vatamangatsiakan'i Tahir mandry eo amin'ny dabilio. Mampiseho ilay mpamono tao amin'ny paositry ny polisy ny lahatsary iray niparitaka be hafa izay nilazan'ity farany fa niseho tamin'ny nofiny ny Mpaminany Muhammad ary niteny taminy hamono an'i Naseem.
Tamin'ny voalohany, nilaza ny olona sasany fa mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Ahmadiyya i Naseem, izay niatrika fanenjehana sy fanentanana fankahalana hatramin'ny Fanitsiana ny Lalàmpanorenana izay nanambara fa tsy Miozolomana ny mpikambana ao aminy tamin'ny taona 1974. Nisioka ny mpitondra tenin'ny vondrom-piarahamonina Ahmadiyya fa efa an-taonany maro izay i Naseem no niala tao amin'io vondrona io:
Tamin'ny 31 Jolay, olona an'arivony no nanao fihetsiketsehana tao Peshawar ho fanohanana ilay namono. Nilanja sora-baventy izy ireo nidera ilay fihetsika ary nangataka ny famotsorana azy tao am-ponja, ary nilaza izy ireo fa “ela loatra ny governemanta” amin'ny fanenjehana ireo raharaha fanevatevana.
Nidera ampahibemaso ilay mpamono ireo olo-malaza Pakistaney toa ny mpilalao sarimihetsika Shahroz Sabzwari ary nalaza be ihany koa ny tenirohy tamin'ny fanohanana azy. Nisioka ho fanohanan'i Khalid ny mpitondra ambony ao amin'ny Jamiat Ulama-e-Islam – Fazl (JUI-F), Mufti Kifayatullah:
Tsy vao sambany no nitranga tany Pakistan ny tranga tahaka ity. Tamin'ny 4 Janoary 2011, maty voatifitry ny iray tamin'ny mpiambina azy ny governoran'i Punjab Salman Taseer tao Islamabad taorian'ny nanehoany ny fomba fijeriny miiba momba ny lalànan'ny fanevatevana.
Na dia mbola tsy nisy aza ny olona novonoina tamin'ny fomba ofisialy teo ambanin'ny lalànan'ny fanevatevana tao Pakistan dia fara fahakeliny, olona miisa 77 no novonoina tsy nandalo fitsarana hatramin'ny taona 1990 nifandraika tamin'ireo fiampangana ireo, araka ny tarehimarika nomen'ny Al Jazeera. Hatramin'ny taona 1987, olona maherin'ny 1.500 no voampanga tamin'ny fanevatevana tao Pakistan, hoy ny New York Times.
Ny matoandahatsoratra tao amin'ny vavahadin-tserasera ProperGaanda nanao hoe :